Dhacdooyinka - El Centro de la Raza
Xarunta Dadka Jinsiyada oo dhan
Sii Sanduuqa Waxqabadka Degdegga ah ee COVID-19
Barnaamijyada Carruurta & Dhallinyarada
Adeegyada Dadka & Gurmadka
Barnaamijyada Waxbarashada & Hantida
Guriyeynta & Horumarinta Dhaqaalaha
U -doodista & Abaabulka Bulshada
Hel ka qayb
Dhismaha Gala Gacal Bulsho
Iibinta Geedka Kirismaska
Día de los Muertos (Maalinta kuwa dhintay)
Dabaaldega Las Posadas
Arrimaha Caddaaladda Deegaanka & Caafimaadka
Ku biir liiska waraaqaha our
Samee Wax Ku Darso
Ku deeqo Alaabada
Taariikhda & Evolution
Iibso Buugga Taariikhdeena
Natiijooyinka & Saameynta
Xarunta Dhaqanka Centilia
Goobaha Kulanka ee Dhismaha Taariikhiga ah
Waxaan haynaa dhacdooyin dhowr ah sannadka oo dhan. Fadlan hubi jadwalka dhacdooyinka si aad u hesho liis dhamaystiran oo dhacdooyin ah. Halkaan waxaa ah lacag ururintayada ugu weyn, dhacdooyinka dhaqanka ama bulshada. Fadlan hubi bogagga dhacdooyinka shaqsiyeed si aad u hesho faahfaahin dhammaystiran.
[eo_events orderby = ”taariikh” amar = ”asc”]
Nagu soo biir Online Sabtida, Oktoobar 2, 2021
6:30 PM Ka Hor Xafladda | 7:00 PM Barnaamijka & Madadaalada
RIIX HALKAAN SI AAD U DAAWATO YOUTUBE 7:00 PM EE 10/2/2021
Ku dalbo xaraashkayaga internetka halkan.
Waxaan rajeyneynaa inaan kula dabaaldegno inta lagu jiro El Centro de la Raza's Dhismaha Gala Gacal Bulsho on your computer, kiniin ama smartphone on Sabtida, Oktoobar 2, 2021 la a 6:30 PM Ka Hor Xafladda | 7:00 PM Barnaamijka & Madadaalada. Dhacdadeena dalwaddu waa xor u ah ka soo qeybgalka. Fadlan isdiiwaangali adiga oo isticmaalaya badhanka gaduudan oo noo sheeg inaad la socon doonto baahintayada onlaynka ah.
HALKAN KA HELI KARTAA
Nagala soo qaybgal Sabtida, Oktoobar 2 -deeda ee 2021 -ka Dhisidda Beesha Jacaylka ah ee Gala oo ka qaybqaado xiisaha tooska ah ee tooska ah iyo xaraashka onlaynka ah oo lacag u aruuriya barnaamijyada iyo adeegyada muhiimka ah oo ay ka faa'iideystaan ​​in ka badan 21,000 oo qof iyo qoysas ku baahsan gobolkeenna. Fiidkii sidoo kale waxaa ku jira soo bandhigida Abaalmarinta & Deeqda -waxbarasho ee Roberto Felipe Maestas. Diiwaangelintu waa lacag la'aan isqoristuna waxay qaadataa dhowr daqiiqo.
Fadlan wac (206) 957-4649 ama iimayl events@elcentrodelaraza.org wixii macluumaad dheeraad ah. Waad awoodaa booqo boggayaga FAQ sidoo kale.
Xiriirrada Degdegga ah ee 2021:
Ku tabaruc, riix halkan.
Si aad u noqoto Danjire Miiska, riix halkan.
Macluumaadka kafaala qaadka, riix halkan.
Si aad ugu deeqdo shay xaraash, riix halkan.
Si aad iskaa wax u qabso ugu samaysato dalwaddii, riix halkan.
Abaalmarinta Legacy ee Roberto Felipe Maestas:
View our Ku guuleystayaasha abaalmarinta 2021 halkan! Aasaasaha aasaasaha El Centro de la Raza wuxuu ahaa Roberto Maestas oo naftiisa u huray dhisitaanka Dr. Wuxuu si qoto dheer u rumaystay in saboolnimada, midab -takoorka iyo sinaan la’aanta bulshada la dabar -goyn karo oo keliya haddii dadka jinsiyadaha iyo asalkooduba isugu yimaadaan inay sidaas sameeyaan. Waxay sharaf u tahay Roberto iyo dhaxalkiisa in Abaalmarinta Dhaxalka ee Roberto Felipe Maestas uu aqoonsan doono laba qof oo tusaale u soo qaatay dhisidda Bulshada Gacaltooyo iyada oo loo marayo midnimo jinsiyeedyo badan, iyo ka shaqaynta baabi'inta saboolnimada, cunsuriyadda iyo sinaan la'aanta bulshada. El Centro de la Raza ayaa u dabbaaldegi doonta iyaga iyo tabarucaadkooda iyaga oo hadiyad ahaan $ 1,000 ugu bixinaya magacooda urur ay doortaan.
Ku taageer carruurta, dhalinyarada, qoysaska iyo waayeelka 43ka barnaamij eeyada iyo adeegyadayada adiga oo iibsanaya geed kirismas oo cusub inta lagu jiro Iibka Geedka Kirismaska ​​ee Sannadlaha ah!
Continue reading “Iibinta Geedka Kirismaska”
Dhacdadan onlaynka ah waa Isniinta, Noofambar 2, 2020 saacaddu markay tahay 5: 30-6: 30 PM.
Continue reading "Día de los Muertos (Maalinta kuwa dhintay)"
Dhacdadan ayaa la baajiyay sanadkan. Continue reading "Cinco de Mayo"
Nagu soo biir Talaadada, Diseembar 17, 2019 El Centro de la Raza dhacdadan bilaashka ah
Continue reading "Dabaaldegga Las Posadas"
Waqtigan, dhammaan Fasallada Karinta La Cocina waa la joojiyay ilaa ogeysiis dambe.
Dhammaan lacagaha lagu soo ururiyey Fasallada Karinta La Cocina waxay ka faa'iideystaan ​​Barnaamijka Fayoqabka Nafaqada Sare ee El Centro de la Raza. Haddii aad jeceshahay inaad ku tabarucdo barnaamijka, fadlan riix halkan.
Waan ku faraxsanahay fahamkaaga muddadan.
LA DHIGAY: 3/21 Picadillo, Tortillas iyo Empanadas
DHAMAATAY: 4/18 Ceviche & Churros
Ma xiisaynaysaa inaad noqoto macallin fasalka mustaqbalka? Ku soo dir Ariana Dorshkind dhacdooyinka@elcentrodelaraza.org.
Fursadaha iskaa wax u qabso, fadlan u soo dir Mandela Gardner mutadawac@elcentrodelaraza.org
Xarunta Dhaqanka Centilia Jikada
1660 S Bandhiggii Roberto Maestas St.
Boosku wuu xaddidan yahay - hadda is -qor Waxa kale oo aad iska diiwaangelin kartaa adiga oo waca (206) 957-4649 ama emayl dhacdooyinka@elcentrodelaraza.org.
Nagala soo qaybgal Café con El Centro de la Raza Tour Khamiista koowaad ee bisha laga bilaabo 8-9 AM
Continue reading "Cafe con El Centro de la Raza Tour"
501 (c) 3 Aqoonsiga Canshuurta #91-0899927
Ma rabtaa inaad nala socodsiiso?
Kusoo Biir Eletletter-keena
©	El Centro de la Raza. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan